The Irrawaddy's Blog: ဦးဝင်းတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးရဲထွဋ် ဘာပြောထားလဲ
ဦးဝင်းတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးရဲထွဋ် ဘာပြောထားလဲ
ဟံသာဝတီသတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာ သမ္မတ ပြောခွင့်ရ၊ ဒု ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သူ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ရေးသား ထားပါတယ်။
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ကျွန်တော့် ရဲ့ အမြင်သဘောထား များကို စာနယ်ဇင်းများက ဆက်သွယ်မေးမြန်းလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အားလုံးအတွက် ဒီနေရာက ပဲ ဖြေကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်နဲ့ နုိုင်ငံရေးအရ အမြင်မတူတာတွေရှိပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိယုံကြည်ချက်အပေါ် ခုိုင်မာစွာရပ်တည်ခဲ့မှုများနဲ့ သူ့ရဲ့ စွန့်လွှတ်ခဲ့မှုများ အတွက် ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးစားပါတယ်။ နုိုင်ငံနဲ့လူမျိုး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးအတွက် သူယုံကြည်ရာ နည်းလမ်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်လုိုတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ စေတနာကို ကျွန်တော်တို့ အလေးထားတဲ့အတွက် အမြင်ချင်းမတူသည့်တိုင်အောင် ဆရာကြီးရဲ့ အတွေးအမြင် သဘောထားများကို ကျွန်တော်တို့အလေးထားမှတ်သားကြပါတယ်။
ဆရာကြီး ကွယ်လွန်သွားခြင်း ဟာ မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးမှာ မိမိယုံကြည်ချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မထောက် မညှာပြောလေ့ရှိတဲ့ အသံတစ်သံ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်သလို သတင်းစာလောကအတွက်ဆိုရင်လည်း အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့၊ အတတ်ပညာ ပြည့်ဝတဲ့ သတင်းစာ ဆရာကြီးတစ်ဦး ဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဦးရဲ့ထွဋ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ မူရင်းအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြထားပါတယ်။
Win Thein said... :
Someone's birthday may be the death day of the other!
Why can't we stay in peaceful co-existence when stay alive?
If you want to pay the debt you owe, it will be an agony for you at the early extinction of the others.